Posted by Tranquillus | Nov 22, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Si loo dhiirrigeliyo shaqaalaha, shirkadaha badankood waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo gunno ah marka lagu daro lacagaha billaha ah ee aasaasiga ah iyo abaalmarin shaqo tayo leh, xaadiritaan, waayeelnimo ama adeegyo kale oo lagu ammaano. Markii ay soo dhowaato xilligii ciidaha, loo shaqeeyahaagu wuxuu ku siin jiray gunno isku mid ah. Si lama filaan ah, waxba. U adeegso warqad tusaale ah kuwa aan soo jeedinayo si aad ugu baaqdo in caadi lagu soo noqdo.
Noocyada kala duwan ee gunnooyinka
Xirfadaha xirfadeed, waxaa jira noocyo kala duwan oo gunno ah. Waxaa jira khidmadaha caadiga ah, ee horey loogu sii diyaariyey heshiiska shaqada. Kadib heshiiska wadajirka ah ama heshiisyada wadajirka ah. Sidoo kale gunooyinka iskaa ah ee, dhanka kale, ay si xor ah u bixiyaan loo shaqeeyaha. Nooc kastoo ay yihiin noocyadiisa lacageed, waxay kuxiranyihiin sharciyo iyo qawaaniin gaar ah.
Lacagta joogtada ah ee caadiga ah ama qasabka ah
Khidmadaha isticmaalaha guud ahaan waxay ku xiran yihiin howlaha shirkadda. Waa nooc ka mid ah gunnada khasabka ah ee shaqaalaha. Waxay kuxirantahay kala-sarraynta, laakiin sidoo kale nooca waxqabadkooda iyo ka dib heerka waxqabadkooda. Loo shaqeeyaha waxaa ku waajib ah inuu bixiyo gunooyinkan, ha noqdo mid shaqsi ama wadar. Tanina waa iyadoo loo eegayo shuruudaha sida saxda ah loogu qeexay heshiiska shaqada, heshiiska wadajirka ah ama qoraallada kale ee rasmiga ah. Xitaa markii ugu horreysay ee noocan ah gunnada la go'aansaday ka dib ballan qaad hal dhinac ah oo loo shaqeeyaha.
Guud ahaan waa:
Gunooyinka dhamaadka sanadka
Gunooyinka ku saleysan ujeeddooyinka ama natiijooyinka
Gunooyinka xaashida dheelitirka
Laga bilaabo bishii 13aad
Lacag-bixintaan waxaa lagu qeexay iyadoo loo eegayo qaab xisaabeed aan beddelmi karin oo lagu sameeyay qoraallada rasmiga ah. Waxay ka kooban yihiin magdhow dheeraad ah oo la siiyo dhammaan shaqaalaha. Iyada oo qayb ka ah qaybaha mushaharka ee naftooda u gaarka ah, gunnooyinkan waxay ku xirnaan doonaan tabarucaadka bulshada iyo canshuurta dakhliga.
READ Sirta iimaylka mudaaharaadka oo si wanaagsan loo qoray
Sidoo kale waa suurtogal in la soo ururiyo khidmadaha cayiman (guurka, dhalashada, PACS), khidmadaha gaadiidka ama khidmadaha cuntada.
Gunooyinka "Iskaa wax u qabso"
Waxa loogu yeero “iskaa wax u qabso”, hal mar ama gunooyin gaar ah waa gunooyin aan qasab ahayn. Shaqo bixiyuhu wuxuu si xor ah u siiyaa iyaga oo ikhtiyaarkiisa ah. Noocyada gunnada waxay noqon karaan:
Gunno-sannadka dhammaadka ah, nooc ka mid ah abaalmarinta oo habka xisaabinta uu dejiyo loo shaqeeyaha heshiiska shaqada ama heshiiska wadajirka ah;
Gunno gaar ah ama mid hal mar ah oo abaalmarin ah, oo ah lacag dheeri ah oo ku saabsan mushaharka uu siiyay loo shaqeeyaha haddii shaqaaluhu uu buuxiyey dhammaan shuruudaha ku lug leh;
Lacag aan shil ahayn;
Gunno la siiyay "sida ku cad shaqada la qabtay"
Dhinaca kale, gunnooyinkan loogu yeero “iskaa wax u qabso” waa qasab waxayna qeyb ka yihiin mushaharka, marka isticmaalkoodu yahay:
Guud ahaan, qadarka waxaa la siiyaa dhammaan shaqaalaha ama si joogto ah isla waaxda,
Joogto ah, oo mushaar la siiyo dhowr sano,
lacag bixin isku mid ah iyo mid go'an.
Sideen u codsan karaa bixinta lacagta caymiska?
Gunno waa qeyb ka mid ah mushaarka. Sababtoo ah kormeerid ama qalad dhanka maamulaha ah, diidmo ka timid loo shaqeeyaha, bixinta bixin la'aanta dheeftan waxaa loo arkaa inay tahay cilad culus oo ka timid shirkaddaada.
Waxaad haysataa 3 sano inaad sameyso cabasho. Haddii ay dhacdo joojinta heshiiskaaga, shaqaale hore wuxuu codsan karaa khidmadaha aan la bixin seddexdii sano ee la soo dhaafay ka hor inta uusan ka tagin shirkadda si waafaqsan Qodobka L.3245-1 ee Xeerka Shaqaalaha.
Haddii loo-shaqeeyahaagu aanu ku siin hal ama in ka badan oo qaddar cayiman ah. Weydiiso iyaga hadal ahaan inay ku bilaabaan. Kadib maqnaanshaha natiijooyinka, u dir warqad diiwaangashan oo leh qirasho risiidh ah. Haddii loo shaqeeyuhu ku siin waayo qadarka uu kugu leeyahay. Waxaad fursad u leedahay inaad u gudbiso arrinta Golaha 'Prud'hommes Council'.
READ Baro sida loo soo bandhigo macluumaadka, dhammaan talooyinka si loo gaaro
Nidaam isku mid ah ayaa loo qaadayaa bixinta hal ama in ka badan oo ah “ikhtiyaari” khidmad ah oo uusan bixin loo-shaqeeyaha. Shaqaaluhu wuxuu markaa ku bilaabi karaa ficilkiisa codsi fudud oo afka ah, ka dib isagoo diraya warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka. Haddii ay dhacdo diidmada loo shaqeeyaha, waxaa suurtagal ah in laga bilaabo tallaabo Golaha Shaqada. Dhinaca kale, Maxkamaddu waxay sheegaysaa, Rugta Bulshada Abriil 1, 1981, n ° 79-41424, shaqaaluhu waa inuu qiil joogtada ah ee khidmadaha horyaala maxkamadaan awooda u leh.
Cadayn ahaan, waa inuu muujiyaa:
Joogtaynta bixinta lacagta caymiska dhawr sano,
Bixinta gunnada dhammaan shaqaalaha ama koox shaqaale ah, tusaale ahaan isla waaxda
Bixinta isla qaddarka sannad kasta.
Waa kuwan qaar ka mid ah waraaqaha tusaalaha ah ee lagu dalbado gunno adeegsi ah, oo aad si fudud ula qabsan karto noocyada kale ee mahadnaqa.
Tusaalaha xarafka koowaad
Mawduuc: Codsi ku saabsan bixinta gunnada dhammaadka sanadka
Iyadoo la raacayo heshiiska shaqaalaysiinta, shirkaddu waxay si caadi ah ii siisaa gunno-sannadka dhammaadkiisa Diseembar kasta. Waxaan halkan kugu ogeysiinayaa inaan lagu xusin diiwaanka mushaharkeyga, illaa aan khaldamo mooyee, sanadkaan.
Intii aan ka shaqeynayay shirkadda [lambar] sano, waa markii ugu horreysay ee aanan helin gunnadayda. Kadib hubinta asxaabteyda, waxaa cadaanaya in inta badan shaqaaluhu ay isku dhibaato qabaan. Marka waxaan u soo gabagabeeyey, in aanaan ku jirin kiiska qaladka fudud ee aniga igu saabsan.
Bixinta gunnadan si kastaba ha noqotee waa mid joogto ah, oo go'an, oo loo fuliyo dhammaan shaqaalaha. Shakhsiyad la'aantaani waxay noqotay mid khasab ah sida sharcigu dhigayo.
Ilaa iyo inta talaabooyinka lagama maarmaanka u ah jabinta caadadan aan la qaadin, waan ku faraxsanahay haddii aad diyaarin karto bixinta gunnadayda dhammaadka sannadka.
Inta aan jawaab sugitaan ah kaaga sugayo sixitaankan, fadlan aqbal salaanteyda ugu fiican.
READ Sidee loogu qancin karaa goob shaqo?
Tusaalaha xarafka labaad
Mawduuc: Codsi ku saabsan bixinta gunnada waxqabadka
Tan iyo bilawgii shirkadeena, sidii [shaqeyn] ilaa [taariikhda], qandaraaskeyga shaqaalaynta wuxuu xusayaa xuquuqdayda gunno waxqabad ku saleysan waxtarkayga iyo wax soo saarkeyga
Tan iyo markii aan ku dhex milmay kooxdaada, waxaad si joogto ah ii siisaa gunnadan dhammaadka sannad kasta.
Lacagta noocan ahi waxay sidaas ku heshay, iyada oo loo marayo isticmaalkeeda joogtada ah iyo soo noqnoqda, dabeecad qasab ah.
In kasta oo aan awooday inaan ku guuleysto natiijooyin wanaagsan sannadkan marka la barbardhigo kii ugu dambeeyay, haddana waxaan ku ogaaday liiskeygii ugu dambeeyay ee mushahar bixinta inaadan i siinin. Waad ku mahadsan tahay inaad ii sharaxday sababta aan u bixin waayey abaalgudkayga, haddii ay xaq tahay.
Haddii kale waxaan filayaa sharci-deg deg ah, oo fadlan aqbal, Mudane, salaanteyda aadka u xushmadda badan.
Soo degso "premier -pleple.docx"	premier-exemple.docx - Waxaa lasoo dagsaday 4105 jeer - 15 Kb
Soo dejiso "Second-example.docx"	deuxieme-exemple.docx - Waxaa la soo dejiyey 4020 jeer - 15 Kb
Warqad Sample ah oo lagu dalbanayo bixinta lacagta caymiska Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeFrance Relaunch | Daahfurka barnaamijka "1 dhalinyaro, 1 xal"
socdaXog-siinta: ma jirto ilaalin shaqaale ah maqnaanshaha anshax xumo dambi oo dhanka shaqada ah